မန္တလေးဆန်ဈေးကွက် အရောင်းအဝယ် ကျဆင်းလာ
Post byမှိုင်းဝေ(AMIA) on Saturday, March 09,2019
တရုတ်ဘက်မှ ဆန်ဝယ်ယူမှု လျော့ကျသွားခြင်းကြောင့် ဈေးနှုန်း ကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ- မှိုင်းဝေ(AMIA)
တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်​အခြမ်းတွင်​ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ဆန်များကို အဖမ်းအဆီး တင်းကြပ်နေမှုကြောင့်​ ယခု ရက်​ပိုင်းအတွင်း မန္တလေးဆန်ဈေးကွက်တွင်ပါ အရောင်းအဝယ် ကျဆင်းနေကြောင်း မန္တလေးမြို့ရှိ ဆန်ကုန် သည်များထံမှ သရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်​​ဖေ​ဖော်​ဝါရီလ ဒုတိယပတ်​အချိန်​ထိ ဆ​န်​​ဈေးနှုန်းများ တည်​ငြိမ်​မှုရှိ​သော်​လည်း၊ ယခုလအစမှ စတင်ကာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်​အခြမ်းတွင်​အဖမ်းအဆီးများ ရှိလာပြီး​နောက်​တွင်​ ဆန်တင်​ပို့မှု အခက်​အခဲများ ဖြစ်ပေါ် လာရာမှ ပြည်​တွင်းဆန်​​ဈေးကွက်​ပါ ကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်​သည်​။
" တရုတ်​တင်​ပို့တဲ့ ဆန်​အ​ရောင်းအဝယ်​က ရိုက်​ခတ်​တာ​ပေါ့။ အခု​လော​လောဆယ်​ထိ​တော့ အ​ရောင်းအဝယ်​ရပ်​တန့်​ဦးမယ်​လို့ ခန့်​မှန်းထားတယ်​" ဟု မန္တ​လေးမြို့မှ ဆန်​ကုန်​သည်​ဦး​ဌေး​အောင်​က ​ပြောသည်​။
လက်​ရှိအချိန်​တွင်​ မန္တ​လေး ဆန်​​ဈေးကွက်​၌ ဆန်​အမျိုးအစားအလိုက်​ အနည်းဆုံး တစ်​အိတ်​လျှင်​ ကျပ် ၁,၀၀၀ ခန့်​မှ ကျပ် ၂,၀၀၀ ခန့်ထိ ကျဆင်းလာ​နေ​ကြောင်း သိရသည်​။
" တရုတ်​ဘက်​က ဆန်​ပြန်​ဝယ်​လို့ ပြည်​တွင်းဆန်​​ဈေး ဆက်​တက်​ဖို့က​တော့ မဖြစ်​နိုင်​​သေးဘူး။ မကြာခင်​အ နယ်​နယ်​အရပ်​ရပ်​က ​နွေစပါး​တွေ​ပေါ်ပြီ " ဟု ဆန်​ကုန်​သည်​ဦးစိုးဝင်းက ​ပြောသည်​။
ယ​နေ့ မန္တလေးဆန်ဈေးကွက်တွင် လက်ရှိ ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ (ပွဲရုံဈေး/တစ်တင်းခွဲအိတ်) ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ရွှေဘိုဘေးကြား ပေါ်ဆန်း ၄၅,၀၀၀ မှ ၄၈,၀၀၀ ကျပ်၊ ရန်ကုန်ပေါ်ဆန်း ၃၈,၀၀၀ မှ ၄၀,၀၀၀ ကျပ်၊ ဧရာမင်း ၃၈,၀၀၀ မှ ၃၉,၀၀၀ ကျပ်၊ မဂျမ်းတော(အရှေ့တော) ၄၀,၀၀၀ မှ ၄၁,၀၀၀ ကျပ်၊ ရန်ကုန်ရေကျ ၂၄,၅၀၀ မှ ၂၅,၀၀၀ ကျပ်၊ အညာသား ၂၅,၀၀၀ မှ ၂၅,၅၀၀ ကျပ်၊ ဆန်ကြမ်းဆလပ် ၂၀,၀၀၀ မှ ၂၀,၅၀၀ ကျပ်၊ ဖန်သီး မနော် ၂၆,၀၀၀ မှ ၂၆,၅၀၀ ကျပ်ခန့် အသီးသီး ပေါက်ဈေးရှိနကြောင်း သိရသည်။
မန္တေလး၊ မတ် ၉
တရုတ္နိုင်ငံ ဘက်အျခမ်းတြင်ျမန္မာနိုင်ငံမွ တင္ပို့သည့် ဆန္မ်ားကို အဖမ်းအဆီး တင်းကြပ်နေမှုကြောင့် ယခု ရက္ပိုင်းအတြင်း မန္တေလးဆန်စေ်းကြက္တြင္ပါ အေရာင်းအဝယ် က်ဆင်းနေကြာင်း မန္တေလးမြို့ရွိ ဆန္ကုန် သည္မ်ားထံမွ သရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖ်ာဝါရီလ ဒုတိယပတ်အခ်ိန္ထိ ဆန်စေ်းနှုန်းမ်ား တည်ငြိမ္မှုရွိသ္လောည်း၊ ယခုလအစမွ စတင် ကာ တရုတ္နိုင်ငံ ဘက်အျခမ်းတြင် အဖမ်းအဆီးမ်ား ရွိလာပြီးနောက္တြင် ဆန္တင္ပို့မှု အခက်အခဲမ်ာျးဖစ်ပေါ် လာရာမျွပည္တငြ်းဆန်စေ်းကြက္ပါ က်ဆင်းလျာခင်ျးဖစ်သည်။
" တရုတ် တင္ပို့တဲ့ ဆန်အေရာင်းအဝယ္က ရိုက္ခတ္တာပေါ့။ အခုလောလောဆယ္ထိတော့ အေရာင်းအဝယ်ရပ္တန့်ဦးမယ္လို့ ခန့်မွန်းထားတယ် " ဟု မန္တေလးမြို့မွ ဆန္ကုန်သည် ဦးဌေးအောင္ကျေပာသည်။
လက်ရွိအခ်ိန္တြင် မန္တေလး ဆန်စေ်းကြက်၌ ဆန် အမ်ိုးအစားအလိုက် အနည်းဆုံး တစ်အိတ္လ်ွင် က်ပ် ၁,၀၀၀ ခန့်မွ က်ပ် ၂,၀၀၀ ခန့်ထိ က်ဆင်းလာနေကြာင်း သိရသည်။
" တရုတ္ဘက္က ဆန်ျပန်ဝယ္လိျု့ပည္တငြ်းဆန်စေ်း ဆက္တက္ဖို့ကေတာ့ မျဖစ္နိုင်သေးဘူး။ မကြာခင် အ နယ္နယ်အရပ်ရပ္က နြေစပါးတြေ ပေါ်ပြီ " ဟု ဆန္ကုန်သည် ဦးစိုးဝင်းကျေပာသည်။
ယေန့ မန္တေလးဆန်စေ်းကြက္တြင် လက်ရွိ ဆန်စေ်းနှုန်းမ်ားမွာ (ပြဲရုံစေ်း/တစ္တင်းခြဲအိတ်) ဆန္တစ်အိတ္လ်ွင် ရွှေဘိုဘေးကြား ပေါ်ဆန်း ၄၅,၀၀၀ မွ ၄၈,၀၀၀ က်ပ်၊ ရန္ကုန်ပေါ်ဆန်း ၃၈,၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀ က်ပ်၊ ဧရာမင်း ၃၈,၀၀၀ မွ ၃၉,၀၀၀ က်ပ်၊ မဂ်မ်းတော(အေရွ့တော) ၄၀,၀၀၀ မွ ၄၁,၀၀၀ က်ပ်၊ ရန္ကုန်ရေက် ၂၄,၅၀၀ မွ ၂၅,၀၀၀ က်ပ်၊ အညာသား ၂၅,၀၀၀ မွ ၂၅,၅၀၀ က်ပ်၊ ဆန်ကြမ်းဆလပ် ၂၀,၀၀၀ မွ ၂၀,၅၀၀ က်ပ်၊ ဖန်သီး မေနာ် ၂၆,၀၀၀ မွ ၂၆,၅၀၀ က်ပ္ခန့် အသီးသီး ပေါက်စေ်းရွိနေကြာင်း သိရသည်။
Thanks much of impress your information . Thank you.
by Myat Myat Win at March 11 2019